Gonzo's Quest | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Gonzo's Quest | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Aga azụ na oge na-esonye famed Spanish onye nchoputa, Gonzalo Pizarro, na-achọ nke furu efu n'obodo El Dorado. Gonzo Ọchịchọ Ihe bụ egwuregwu na a raara nye a conquistador si search maka mythical obodo mere ka ọlaedo ahụ e kwuru na a ga-emi odude ebe na South America. Na-achọ n'obodo gold, ikekwe gị onwe gị pụrụ jidere ụfọdụ n'ime ndị ọlaedo ụgwọ ọrụ maka onwe gị!
Gonzo Ọchịchọ Ihe nwere 5 -esi anwụde, 3 e nyere ahịrị na 20 paylines. Egwuregwu na-themed gburugburu enyere Gonzo na-achọ nke furu efu obodo ya bụ ịchọ site n'oke ọhịa nke Peru dị ka ị igbagburugburu esi anwụde na-anakọta ụgwọ ọrụ na ị merie. Ị ga-ahụ jackpot mgbe ị akpatre aga nke ọma na-achọta obodo.
Nke a egwuregwu na oru na 2010 site na-ewu ewu Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ, NetEnt. Ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ si mbụ platinum video oghere egwuregwu àjà ma nwee nnukwu ihe ịga nke ọma mgbe ya na nke mbụ ulo oru. Site ya ndị magburu onwe ndịna-emeputa na gameplay, ọ ka na-arụ ewu ewu gburugburu ụwa, taa.
Gonzo Ọchịchọ Ihe atụmatụ ụfọdụ anya ini enye okụtde ndịna, -abụghị intrusive n'okirikiri, na nwere ego atụmatụ na-agụnye nnukwu atụmatụ na free spins Njirimara. The nnukwu mma bụ na nke ị na-enwe nnukwu esi anwụde na daharia si n'elu ihuenyo. Ịnwere ike ịgbalite nnukwu atụmatụ site na-a-emeri Nchikota na ike na-retriggering ya ruo mgbe i nwere ike ọ gaghị emeri ọ bụla ogologo. Ị pụrụ ịnụ ụtọ multipliers a mode ruo 15x.
The free spins atụmatụ nwere ike etinyere ya n'ọrụ site na-atọ ma ọ bụ karịa freefall akara. Ị pụrụ ọbụna rụọ ọrụ nnukwu feature mgbe ị na free spins mode. Tinye ka na gị Wager multipliers na ị bụ na ụfọdụ jụụ emeso. The free spins nwere ike retriggered ọ bụrụ na ị ga-ọzọ na-emeri edoghi.
Gịnị mere play Gonzo Ọchịchọ Ihe?
Ihe mbụ na guzo apụ banyere egwuregwu a bụ otú ezigbo ndị na-aga aga bụ. Ọ-adịghị dị ka gị na mbụ oghere egwuregwu na ọ bụ ya mere mfe ịhụ ihe mere na ọ bụ nke ewu ewu n'etiti Player. Oge ọ bụla ị Akara a na-emeri Nchikota, Gonzo moonwalks gafee ukwu, nke na-eme ka a keukaochi ahụmahụ mgbe ị na-egwu na-akpọ. Ọzọ dị ukwuu akụkụ nke egwuregwu na-eme ka ọ pụta ìhè bụ eziokwu ahụ bụ na-esi anwụde adịghị akpa ogho; ha na-ada ka a ụyọkọ blocks. Ọ bụ atụmatụ ndị a na-eme ka i na ị na-egwu na-akpọ a ukporo obere egwuregwu na-eme ọbụna ka ị na-echefu na ị na-ịkụ nzọ na ego. The bonus atụmatụ pụtara na i nwere ike inwe ụfọdụ oké ụgwọ ọrụ maka egwu na-akpọ; ọbụna ma ọ bụrụ na payouts dị anya site n'ibe, mgbe ha na tụgharịa na i nwere ike imeri a otutu.